झूटा झण्डा आतंकवादीहरूले 23 र 24 अक्टुबरमा लन्डन, म्यानचेस्टर, पेरिस, बार्सिलोना र रोटरडमलाई आक्रमण गर्छन्? (अद्यावधिक)): मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	22 अक्टोबर 2019 मा	• 37 टिप्पणिहरु
आज मलाई एउटा भिडियो दिइएको थियो जसमा ओले डमेमेगार्डले 23 र 24 अक्टूबरको लागि लन्डन, म्यानचेस्टर, पेरिस, बार्सिलोना र रोटरडममा आतंकवादी हमला (अ flag्ग्रेजी: झण्डा झण्डा) को भविष्यवाणी गरेको छ।लेखको तल अपडेट गर्नुहोस्)। मैले अघिल्लो लेखहरूमा नियन्त्रणित विपक्षी प्यानको रूपमा डेनिस वैकल्पिक मिडियाको अग्रगामी ओले डामेमेगार्डलाई वर्णन गरेको छु। यसको मतलब यो हो कि उसले सायद क्रेडिट जित्ने सत्यलाई प्रकट गर्न सक्छ र शासक शक्तिको लागि सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्दछ। नियन्त्रित प्यादा कहिलेकाँही कुरा प्रकट गर्न सक्दछ। अवश्य पनि म गलत हुन सक्छु, तर मेरो शंका यो छ कि डमेमेगार्ड त्यस्तो नियन्त्रित प्यादा हो।
उनले विगतमा जेन गार्डनर नामको वैकल्पिक मिडियाबाट एक पूर्व फ्रन्टमैनलाई बचाए। यो जेन गार्डनर (वैकल्पिक मिडियामा धेरै वर्ष प्रख्यात भए पछि) भगवान संप्रदाय संग सम्बन्धित हुन सक्छ भन्ने कुरा सकियो। In यो लेख en यो लेख मैले वर्णन गरे कि कसरी वैकल्पिक मिडिया अगाडि पुरुषहरूले जहिले समर्थन प्राप्त गर्दछन्, र जहाज डुब्दछन्। एउटा अचानक पेडोफिलियाको महिमा गर्ने गुटको सदस्य हुन जान्छ र अर्कोले रेडियो प्रसारणमा प्रत्यक्ष रूपमा आत्महत्या गर्दछ (पछि फेरि जीवित हुने छैन)। नियन्त्रित विपक्षको त्यो खेल कसरी प्ले गरिन्छ भनेर पत्ता लगाउन ती लेखहरू अध्ययन गर्नुहोस्।
Dammegard आसन्न आतंकवादी हमलाहरु मा आफ्नो जानकारी को आधारहरु को लागी वर्षहरु को लागी केहि जानकारी प्रवाह को ट्र्याकमा (यसको आफ्नै शब्दहरु अनुसार)। म मद्दत गर्न सक्दिन तर त्यस्तो धारणा प्राप्त गर्नुहोस् कि उसलाई जानकारी दिइयो। जहाँसम्म मेरो सम्बन्ध छ, यसको मतलब यो छ कि हामीसँग पहिले नै एउटा छ सुरक्षा नेट फ्रन्टमैन सुरु भइरहेको छ, त्यो कुनै आक्रमण पछि सत्य खोजी गर्नेहरूले सबै एकैचोटि समात्न सक्छन्। सबै पछि, उहाँ नायक हुनुहुन्छ जसले पहिले नै यो सबैको भविष्यवाणी गर्नुभयो।
जहाँसम्म मेरा सवालहरू छन्, त्यसकारण हामी ती (झूटा झण्डा) आक्रमणहरू वास्तवमै आउने कुरामा छक्क पर्नु पर्दैन। त्यसोभए हामी सायद एक नयाँ 'सत्य समुदाय' अनलाइन पाउनेछौं र त्यो सत्य समुदाय पूर्ण रूपमा सेवाहरूको जेबमा हुनेछ, किनकि उनीहरूले आफ्नो विश्वसनीय फ्रन्टमैन (ओले डमेमेगार्ड) चाँडै सुरू गरेका छन्। दशकौंदेखि नियन्त्रित विपक्षीको खेल यो नै हो, र यस पटक यो हुनेछ।
ओले आफ्नो सूचनालाई क्राइसिस सलुशन्स (सक्रिट-सलुशन्स.कट) भन्ने कम्पनीबाट आंकडामा आधार दिन्छन। मेरो तल्लो पेट भन्छ कि उसले उस्तै सेवाहरूबाट झूटा फ्ल्याग अपरेशनहरू नियन्त्रण गर्दछ उस्को जानकारी प्राप्त गर्दछ।
Dammegard भोलि र भोलिको भविष्यवाणी भविष्यवाणी गरीएको पाँच शहरहरुमा 39 आक्रमणहरू। झूटा फ्ल्याग अपरेशन (जुन आतंक अभ्यासको रूपमा घोषणा गरिएको थियो) लाई नाम पनि दिइने थियो। यो 'सागर ईगल' को बारेमा हुनेछ।
थप रूपमा, त्यहाँ उत्तरी स्विडेनको एक आणविक ऊर्जा संयंत्रमा एक प्रकोप सम्बन्धित एक अभ्यास हुनेछ, जुन Dammegard पनि एक झूटा झण्डा आतंकवादी हमला हुन आशंका छ। आफैंको लागि हेर्नुहोस् दाम्मेगार्डले यसलाई अन्तर्वार्तामा राम्ररी व्यक्त गर्दछ कसरी वैकल्पिक मिडियाको गुरुको रूपमा। म त्यो मान्छेलाई विश्वास गर्दिन, तर मैले वर्णन गरें कि दुई उल्लेखित वेब लिंकहरू र के माथिको माथि छ।
यदि यो वास्तवमै आतंक अभ्यास मात्र होईन, तर वास्तविक (झूटा झण्डा) हमलाहरू पछ्याउँदछन्, तब तपाईंले यसको विपरित प्रभाव पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् सेवाहरूले भनेको छ कि ओले डमेमेगार्ड र वैकल्पिक मिडिया जस्ता च्यानलहरू यसको लागि दोषी छन्। आतंकवादी संगठनहरू व्यायामका बारे सचेत छन् र त्यसैले ती व्यायाम घटनाहरूलाई ती दिनमा वास्तविक आक्रमण गर्न प्रयोग गर्दछन्। संक्षिप्तमा: यो निश्चित रूपमा ती (नियन्त्रित) वैकल्पिक मिडिया हो जुन ब्ल्याकजेकमा दोष लगाईन्छ र यो स्थायी रूपमा स्थायी रूपमा इन्टरनेटबाट हटाइएको सबै कुरा हटाउने राम्रो कारण हो। वैकल्पिक मिडिया तब, सबै भन्दा पछि, ती सबै जसो व्यायामहरू 'सम्भव भएसम्म गोप्य' तरिकामा योजनामा ​​ल्याइएको थियो। त्यसोभए यो भन्न सकिन्छ कि वैकल्पिक मिडियाले "आतंकवादी समूह" लाई सूचनाको साथ मद्दत पुर्‍यायो ताकि तिनीहरू दायाँ आक्रमणहरू गर्न सक्षम थिए जबकि सबैले यो व्यायाम हो भन्ठाने।
पुलिस र सेनाले समेत (एक नक्कली हमलाको मामलामा, जसमा यो वास्तविक हो भनेर मानिन्छ; त्यसकारण झूटा झण्डा) भन्ने भन्छ कि सत्य खोजीकर्ताहरूले उनीहरूको क्यामेरा र जानकारी साझा गर्दै छन् (हेर्नुहोस् डम्मेगार्डको फिल्ममा सबै कुरा), आतंककारी समूहहरूले अझ बढी मद्दत गरे जसले तिनीहरूको काममा बाधा पुर्‍यायो।
के त्यस्तो ठूलो आत terror्क 911 को परिदृश्य थिएन? त्यसबेला सम्म त्यहाँ एयरस्पेस सुरक्षा संगठन NORAD बाट प्रमुख अभ्यास भइरहेको थियो; जो आतंकवादी आक्रमणको घटनामा एयरस्पेस समन्वय गर्दछ। यसैले यो देख्न सकिने दोहोरो तल्लो हो कि वैकल्पिक मिडियालाई भोलि र भोलिको दिन आतंकवादको स्थितिमा संयुक्त रूपमा जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ। त्यसो भए आतंकवादी अभ्यासको बारेमा यसको प्रारम्भिक खुलासाको साथ वैकल्पिक मिडिया वास्तवमा सह-जिम्मेवार बनाइएको छ।
यो कस्तो परिदृश्य हुनेछ; (1) Ole Dammegard शक्ति सुरक्षाको प्यादाको रूपमा सत्य आंदोलनमा नयाँ नेता बन्छ of (2) उनी आतंकवादको वास्तविक क्रियान्वयनको लागि आंशिक रूपमा जिम्मेवार छन् जुन मितिमा उसले प्रकाशमा ल्याउनुपर्‍यो, आवश्यक भएमा, कफी मैदान हो। जे भए पनि, यो अभ्यास वा कुनै (झूटा झण्डा) आक्रमण हुनेछ कि देख्न बाँकी छ। यो, तथापि, नक्कली झण्डा आतंक लहरको अपेक्षाहरूसँग मिल्दो छ जुन साइटमा पहिले नै उल्लेख गरिएको छ। युरोपले योजनाबद्ध ठूलो अराजकताको लागि किकस्टार्ट प्रयोग गर्न सक्दछ। पक्कै यो क्षण मा ब्रेक्सिट अब अन्त मा एक निराशा मा समाप्त देखिन्छ। उनीहरू अराजकता भन्दा बढि केहि चाहान्छन्; 'अर्डो अब चाओ' को लागी।
त्यसकारण ड्यामेगार्डले सम्भवतः वैकल्पिक वेबसाइटमा र पुलिस, सेना र 'राहतकर्मीहरू' को फिल्मिंगमा निश्चित प्रतिबन्धको लागि आधार निर्माण गर्दछ।
24-10-2019 अपडेट गर्नुहोस्
समयको लागि त्यहाँ आक्रमण वा आतंक अभ्यासको कुनै संकेत छैन। यसैले डम्मेगार्डको भूमिका मैले उसलाई श्रेय दिनुभन्दा थोरै सानो थियो, र ती उही पुरानो युक्तिहरूको सहारा लिए। ऊ ठूलो नायक बन्न सकेन, न त उनी र उनका समर्थकहरू पुलिस र सेनाको छानबिन गरेर आतंककारीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने सहयोगी भए। होइन, ऊ त्यस्तो मानिस बन्यो जसले फेरि वैकल्पिक मिडियाको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्न सक्छ। म फेरि भन्दछु, किनकि यो पहिला उनको महान मित्र 'जेन गार्डनर' को सदस्य बन्नुभयो र वर्षौंदेखि परमेश्वरका सन्तान सम्प्रदायको नेताको रूपमा अनमास्क गरीएको थियो। एउटा गुट जसले बच्चाहरूसँग यौन उत्तेजित गर्दछ। ओले डामेमेगार्ड पहिले नै शिल साबित भइसकेको थियो र अब प्रमाण दिन्छ कि एकपटक फेरि। यो सेवाहरु को एक सुरक्षा नेट रणनीति हो। तिनीहरूले आफ्नो प्यादहरू सुरू गरिरहेछन्, जुन व्यापक ठाउँमा वैकल्पिक वेबसाइटहरू द्वारा प्रचार गरिएको छ (जुन पनि आत्म-नियन्त्रित छन्)। त्यसोभए तिनीहरूले एउटा ठूलो घोटालामा चीजहरू उडाए। मैले यस प्रक्रियालाई बिगतका लेखहरूमा वर्णन गरेको छु। म मेरो केसमा रहेको छु।
तपाईलाई मन दिनुहोस्, ओले डामेमेगार्ड जस्ता व्यक्तिहरूले षडयन्त्र सिद्धान्तहरूको रूपमा आधा सत्यहरूको घोषणा गर्न जारी राख्छन्। उनीहरूले आलोचनात्मक सोचलाई बदनाम गर्नुपर्दछ पहिले धेरै समर्थकहरू जम्मा गरेर र त्यस पछि लाजमा पर्नु। Zen Gardner पनि बस नियन्त्रण मा राखिएको छ। Willem Felderhof (ओपन माइन्ड कन्फरेन्स) र Ole Dammegard जस्ता व्यक्तिहरू भाग लिन खुसी छन्, तर साथै साइटहरू एला Ster। ती शिलहरूबाट टाढा रहनु भनेको मेरो सल्लाह हो।
मूल लेखको प्रकाशन मिति: 22 अक्टूबर 2019 16: 47
रेड क्रॉस अभियान 'फिल्मिंग दुर्घटनाहरू' स्मार्ट तरीकाबाट 'फिलिपि ab दुरुपयोग पुलिस' लाई प्रतिबन्ध गर्ने?
स्ट्रासबर्ग क्रस बजार बजार र भ्रष्टाचार आतंकवादी धेरै राम्रो समयको लागी देखिन्छ (यूआरओजेन्डरको स्वागत छ)
'आतंक एक संरक्षक हो' AIVD को मन्त्र
ट्याग: 5, बार्सिलोना, संकट, झूटा, विशेष, झण्डा, आणविक ऊर्जा संयंत्र, लन्डनमा, म्यान्चेस्टर, NORAD, व्यायाम गर्नुहोस्, ओले डेंगर्ड, सञ्चालन, पेरिस, रोट्टरड्याम, समुद्री चील, समाधान, शहरहरू, आतंकवाद, आतंकवादी हमलाहरू, झूटा झण्डा, पाँच, स्वीडेन
22 अक्टोबर 2019 मा 17: 25
"म के गर्न सक्छु?" त्यसोभए डम्मेगार्डको सल्लाह अनुसरण नगर्नुहोस् र विशेष गरी हटस्पटलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र केन्डमा राखिएको खाना र पिउने पानी केहि हप्ताको लागि खरीद गर्नुहोस्।
त्यसोभए यो नसोच्नुहोस् कि तपाई फिलिमांकन द्वारा प्रमुख सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक निषेध महसुस गर्न को लागी एक जाल हो। त्यसोभए मेरो सल्लाह: शक्ति ओले डामेमेगार्डको यस प्याडमा सुन्नुहोस्।
22 अक्टोबर 2019 मा 18: 16
सत्य खोजी गर्नेहरू चाँडै नै (आतंकवादका गोप्य सेवाहरू - ओले डमेमेगार्ड) को नयाँ आतंकवादी हुनेछन्। उनीहरूले आतंककारी समूहहरूलाई अभ्यासको मितिहरू र स्थानहरू बाहिर ल्याएर सूचना प्राप्त गर्न मद्दत गरे र उनीहरूले बाटोमा पुलिस र सेनाको छानबिन गर्न मानिसहरू पठाए (आतंककारीहरूले उनीहरूलाई फेरि प्रतिक्रिया दिन अनुमति दिए)।
मेरो शब्दहरू चिन्ह लगाउनुहोस्!
22 अक्टोबर 2019 मा 18: 02
Grapperhaus प्रतीक्षा गर्न सक्दैन ...
22 अक्टोबर 2019 मा 18: 42
के मैले यहाँ सुने "Inofizielle Mitarbeiter" हुन्छ? त्यो DDR युगको केहि सम्झाउनुहोस् ..
ग्रापरमेकरबाट आएको त्यो दृश्यले मलाई निश्चित युगको कडा सम्झना गराउँछ, तर म छ र एक चौथाई गलत हुनेछ।
22 अक्टोबर 2019 मा 19: 40
किन चीजहरू यति गाह्रो बनाउँदछन्, हेर ओबर्सेट र उनको मन्त्रीलाई फर Staatssicherheit लाई सहयोगी हात दिनुहोस् ... किनकि हामी सँगै बलियो छौं 😀
3 नोभेम्बर 2019 मा 17: 03
हामी अब साल्मन र मार्टिनको अलिकति बढाइचढाइ गरिरहेका छैनौं ... पुलिस राज्य हाहााहा
22 अक्टोबर 2019 मा 21: 33
ओलेको भिडियोको माथिल्लो दायाँमा लोगोमा हेर्नुहोस्। किन यति धेरै प्रतीकवाद जब तपाईं वास्तवमा आफैलाई एक सत्य खोजी गर्नुहुन्छ। त्यसोभए श s्का रोप्नु आवश्यक छ?
22 अक्टोबर 2019 मा 22: 37
ठ्याक्कै मार्कोस व्यक्तिहरू कम महत्त्वको प्रतीकवाद, यो शुरूमा सन्देशको मूल हो।
तर किन, उदाहरणका लागि, एलाले स्टेर गरे वा उनीहरूको वेबसाइटमा मार्टिनभ्रिजल्याण्ड फिल्म प्रचार गर्न नचाहेको जान्न चाहन्थे पेगिडा प्रदर्शन छलछामबाट, तर त्यो भेडाहरूको भेडाको कपडा ओले डमंग्वार्डबाट।
मार्टिन भ्रिजल्याण्डको घोषणालाई ओममा कहिले गम्भीर रूपमा लिएन, किन? किनभने यो ब्लगर जाँच गरिएको छैन, त्यसैले व्यक्तिहरू।
दम्मगार्ड जुन कुरा गर्दछ र हिट हुन्छ र कहिले पनि गम्भीर सामग्रीको साथ कहिले पनि समर्थन गर्दैन। 80% होक्स भएकोमा सबै झण्डा झण्डा हो। ओले डम्गार्ड जस्ता व्यक्तिहरू सबैभन्दा नराम्रो किसिमका पनि हुन्छन्, भूमिगत (प्रतिरोध आन्दोलन) अन्तर्गत गद्दारहरूले त्यसलाई राख्नको लागि, तपाईंको सिपाहीले तपाईंको पछाडि तपाईंको يونيفارم सहित। शुट
नियन्त्रित विपक्ष वन्टटोकन, एलास्टार, निबुरु.केप र धेरैको रूपमा भन्नुहोस्।
यो आइके जस्तो मोहरा हो जुन सेन्सर गरिएको छैन। यदि तपाईं सीआईएको बारेमा कडा कथन गर्नुहुन्छ र तपाईंले बाधा पुर्‍याउने अपेक्षा गर्नु भन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सोच्नुहुनेछ, होईन, ओले होइन, भर्खरै जागृत मभ टिमलाई राख्न सक्छ, एक राम्रो कास्ट गद्दार जसलाई तपाईं ओले डम्गुगार्ड जस्ता व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ , धेरै पंखहरू सहित प्याक, सुनेर
22 अक्टोबर 2019 मा 22: 50
यो धेरैले स्वीकार गर्दैनन् जसले PsyOps र "समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान" को बारेमा "गहिराइसम्म" कुरा स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्ने कसैले पनि शक्तिको मोल हुन सक्छ।
यसको लागि तपाईंले देख्नुपर्दछ कि सत्तारूढ शक्तिलाई थाहा छ कि विपक्षी दललाई आफैंले समात्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले मोहनलाई विपक्षी नेताका रूपमा नियुक्त गर्नुभयो भने।
यस्तो राम्रो-कास्टको विपक्षी प्यादा एउटा गिरगिट जत्तिकै हो जसले वास्तवमा स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने मानिसहरूसँग उही र color र स्वाद लिन्छ। यसले मलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ, किनकि कसैले डम्मेगार्डलाई मन पराउँछ, र रबर्ट जेन्सेनले पनि मैले जे लेराउँदछु ठ्याक्कै नक्कल गर्ने प्रयास गर्दछु। केवल मेरो साइट म्यूट गरिएको छ, जताततै सेन्सर गरिएको छ र encapsulated गरिएको छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरूले पूरा ध्यान प्राप्त गर्दछन्।
धेरै परिष्कृत र स्मार्ट रणनीति।
22 अक्टोबर 2019 मा 22: 58
धेरै परिष्कृत, त्यो सामूहिक मनोविज्ञान दशकौंदेखि भइरहेको छ, हुनसक्छ यसले जनताको लागि काम गर्दछ, तर सबैको लागि मात्र होईन, र यो झन् झन् बढी हुँदै गइरहेको छ।
22 अक्टोबर 2019 मा 23: 39
खैर, xandernieuws बिर्सिए, अर्ध-टेलिग्राफ समाचार पत्र वा शीर्ष नियंत्रित विपक्षीहरू जस्तै त्यहाँ छन्।
यस्तो देखिन्छ कि ती सबै वेबसाइटहरूले सामूहिक रूपमा ओले डमेमेगार्डको समाचार सञ्चार गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो सबैको लागि धेरै खराब छैन जुन यो वर्षा रडारमा समाप्त भएन। हुनसक्छ त्यो आउँनेछ, "रडार हमला", तपाई Xandernieuws वा Telegraaf वा ellastar को सदस्य हुनु पर्छ।
त्यसो भए एउटा अलार्म घण्टी टाढा जानु पर्छ।
किनभने मानौं कि ओले सही हुन गइरहेको छ, त ऊ षड्यन्त्रमा छ, मानौं ऊ ठिक छैन भने त्योलाई उक्साउने वा डराउने भनियो, सबै वैकल्पिक मिडियालाई बिदाइ गर्नुहोस्, तर ओले तल जान्छ
र बाँकी जारी छ किनकि तिनीहरू शुद्ध रूपमा मेसेन्जर छन्।
ब्यूँझने भीडको लागि सामूहिक मनोविज्ञान
22 अक्टोबर 2019 मा 23: 44
राम्रो .. डी Telegraaf मुख्यधारा PsyOp भूमिका खेल्छ र नियन्त्रित विपक्षी वेबसाइटहरू सुरक्षा जाल को भूमिका खेल्छ।
सुरक्षा जालहरू जसले भृजल्याण्डको र color्ग लिन्छन् गिरगिटहरू।
फेसबुक र अन्य सामाजिक मिडिया को सेन्सरशिप बाकी छ। नियन्त्रित वैकल्पिक साइटहरूले केवल सुरक्षा नेट प्यादहरू धक्का दिन्छन् र भ्रिजल्यान्डलाई मृत्युमा मौन गर्दछ।
अब Xender मा बाहेक ... किनकि अब Geenstijl र जेन्सेनको साथ लि link्क एकाएक बनाउनु पर्छ, किनकि म ती2साइटहरूलाई सँधै खुला गर्दछु।
23 अक्टोबर 2019 मा 05: 33
मैले बुझें र राम्रोसँग बुझ्दछु कि तपाईले माथि के बुझाउनु भयो। जहाँसम्म, के कुराले मलाई अझै व्यस्त राख्छ भन्ने प्रश्न यो साइट किन परिचित प्रतीकवाद प्रयोग गर्दछ। व्यक्तिहरूको संख्या जसले यस प्रतीकवादको माध्यमबाट देख्दछन् बढ्दो छ, त्यसोभए किन यो युक्ति। यसको पछाडि तपाईको विचार के हो?
23 अक्टोबर 2019 मा 07: 14
मैले यो पनि याद गरें कि मार्टिन भ्रिजल्याण्ड जेन्सिनको जस्तो सास र कुनै शैलीमा उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरू वास्तवमै सोच्दछन् कि सबैजना यसलाई पार गर्न सम्मानजनक छ।
यसले मलाई प्रहार गर्दछ कि xandernieuws को प्रतिक्रिया बीचमा, उदाहरणका लागि, त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू छन् जुन वास्तविक स्थिति बुझ्छन्। अब एक सानो तेल चलाएको, तर बिस्तारै ठूलो र ठूलो हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूले के चाहन्छन् गर्न सक्छन् तर धेरै ढिलो भइसक्यो।
सत्य पहिले नै जितेको छ।
22 अक्टोबर 2019 मा 22: 21
ओले यस वेबसाइटमा पढ्न सक्छ? मिनेटमा 14: 21 उनी भन्छन्, "यो पुरानो समस्या, प्रतिक्रिया, समाधानमा आधारित छ।" र यसलाई केही थप दोहोर्याउँदछ।
हामी यहाँ एउटा पोल सुरु गर्न सक्छौं। मार्टिनले भनेका कुन दृश्य सत्य हुनेछ? 😉
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ परिदृश्य2स्क्रिप्टको लागि सबैभन्दा मनपर्दो छ। एक ठूलो समूह एक पटकमा खेलबाट बाहिर राखिएको छ। राजनीति र मुख्य स्ट्रीम मिडियामा वैकल्पिक मिडियाको सन्दर्भमा बढ्दो सन्दर्भमा भइरहेको छ। ती वैकल्पिक मिडियालाई उनको शर्टमा बदल्न यो "सुन्दर" क्षण हो।
तर यदि चीजहरू योजना अनुसार चलेनन् भने, परिदृश्य 1 अवश्य पनि राम्रो ब्याकअप योजना हो। यसको लागि, पूर्वानुमान गरिएको आक्रमणहरू पनि लिनुपर्दैन। यदि केहि हुँदैन भने, त्यसपछि Ole स्वचालित रूपमा सबै-राम्रा कल्याण मा उच्च गरीन्छ।
23 अक्टोबर 2019 मा 04: 21
के यो सबै कुराको फिल्म बनाउन स्मार्ट छैन र यस बाहिर ल्याउनको लागि होइन। सबै अनुसन्धान पूरा नभएसम्म कुर्नुहोस् र त्यसपछि अनलाइन राख्नुहोस्, ताकि सम्भवतः आधिकारिक कहानी अमान्य हुन सक्छ?
23 अक्टोबर 2019 मा 08: 32
होईन, किनभने सम्भवतः तर्क प्रयोग गरिएको छ कि आतंककारीहरू (यदि केहि भयो भने) ठूलो डेटामा पहुँच थियो.. वा: डाटा जुन गोपनीयताबाट (स्थापित अनुप्रयोग पछि) फोनबाट संकलन गर्न सकिन्छ।
अर्को शब्दहरूमा: धेरै जसो अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई तपाईंको स्थानीय भण्डारण पहुँच गर्न र त्यो डाटा अवलोकन गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसैले ठूला डाटा सर्भरहरूमा प्रायः तपाईंको फोटोहरू र भिडियोहरू हुन्छन्।
यदि "आतंकवादी" ले त्यो ठुलो डाटा (ह्याकिvers सर्भरहरू) पहुँच गर्न सक्दछन् भने, उनीहरूसँग तपाईंको फोटोहरू र भिडियोहरू हुनेछन्।
23 अक्टोबर 2019 मा 05: 40
23 अक्टोबर 2019 मा 08: 48
ओलेलाई धेरै हमला गरियो ।..ल्डड्स ओले। यो सामान्य गर्नु उसको काम हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सत्य खोजी गर्नेहरू डम्मेगार्ड मार्फत दबिने बानीमा छन्।
अवश्य पनि धेरै यस सुरक्षा जालको पछि लाग्नेछन्, तर यो सबै मेरो लागि परिष्कृत छ।
"विपक्षलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तम तरिका यसलाई आफैले नेतृत्व गर्नु हो"।
एक राम्रो गिरगिटको रूपमा, Ole Dammegard अब ती पदहरू पनि प्रयोग गर्दछ।
23 अक्टोबर 2019 मा 08: 49
अल्फ्रेड Lambremont Webre ... अर्को शानदार नियंत्रित विपक्ष प्यादा
23 अक्टोबर 2019 मा 08: 58
ओले महँगो मोटोहोममा यात्रा गर्न सक्दछ र सबैभन्दा उत्तम कारनामहरूको अनुभव गर्न सक्दछ।
उसको भूमिका: दमनको बानी बसाल्नुहोस् (र विशेष गरी 'डराउनुहोस्' .. किनकि सबै नै ओले जस्तो नायक होईन)।
23 अक्टोबर 2019 मा 09: 42
हे ओले! के यो इरादा यो हो कि तपाईंले पहिले नै नयाँ कानूनको लागि जग बसाल्नुभयो जुन अनुमति बिना साना बैठकहरू निषेध गर्दछ?
23 अक्टोबर 2019 मा 06: 05
यो सही हो कि ओले एक नियंत्रित विपक्ष हो मा। के उसलाई त्यो आफै थाहा छ? के ऊ गहिरो अवस्थाको सचेत अंश हो वा ऊ आफैंले हेराफेरीको शिकार हो?
23 अक्टोबर 2019 मा 08: 43
ऊ वास्तवमा सिकार जस्तो देखिदैन जस्तो तपाईलाई लाग्छ? तपाईले केवल आँखालाई हेर्नु पर्छ।
23 अक्टोबर 2019 मा 10: 54
के अब खेल सुरु हुन्छ?
23 अक्टोबर 2019 मा 17: 13
अधिक व्यक्तिहरू जो ओले डमेमेगार्ड एक सीआईए सम्पत्ति हो भन्ने लाग्छ:
23 अक्टोबर 2019 मा 22: 32
ओले यो एक भयानक आतंक दिन थियो!
त्यसैले शिल टोकरीबाट खसे
यसबाट छुटकारा पाउनुहोस्..सर्नुहोस् .. पछाडि टक्कर होइन!
23 अक्टोबर 2019 मा 22: 33
24 अक्टोबर 2019 मा 12: 17
केवल नम्बर 39 मिल्दछ। (Ole)
24 अक्टोबर 2019 मा 16: 33
र पाउमा, अवश्य पनि, कल कन्सर्टको बारेमा तुरुन्त छलफल भएको थियो .. एक ट्रकमा 39 निकायहरूको पछि ..
24 अक्टोबर 2019 मा 16: 35
39 निकायहरू 39 आक्रमणहरू जस्तै छैनन्, तर मैले यसलाई तत्काल याद गरें।
25 अक्टोबर 2019 मा 19: 25
30 अक्टोबर 2019 मा 05: 54
30 अक्टोबर 2019 मा 12: 31
महान! हामीले यसलाई रोक्यौं ओलेलाई धन्यवाद!
यसलाई जारी राख्नुहोस् ओले!
ओलेलाई धन्यवाद, नाटो तुरुन्तै झूटा झण्डा फहराउन जम्मा भएको छ!
वाह WauW WauWW !!! Ole मात्र एक नायक मानिस हो!
विशाल भारी !!
"ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठकहरू!" मेरो गधा
1 नोभेम्बर 2019 मा 00: 09
त्यस्तो भिडियोमा प्रतीकवाद र / वा एनएलपी प्रविधिहरू कति टाढा जान्छ?
म सोध्छु किनकि मैले याद गरे कि म ओलेको स्कार्पबाट अलमलिएको छ जुन मलाई सर्पको छालाको सम्झना गराउँछ। मैले यस भिडियोमा ओलेको हेराइ पनि याद गरे। ऊ नजिकको नजिक छ र श्रोतालाई तलतिर हेर्छ।
1 नोभेम्बर 2019 मा 00: 59
ती प्रयोग गरिएको ध्यान नरहेको प्रविधिहरू हुन्
30 अक्टोबर 2019 मा 06: 09
माथि अपडेट गर्नुहोस्, 33.39 मिनेट यहाँ स्क्रीनमा, रमाईलो मानिसहरू।
« डीपफेक 'भूत परिवार' तपाइँको सबै स्वतन्त्रता र परिचय 'दिमाग पुलिस' (भाग 3) हटाउन को लागी PsyOp
पाथी सिनेमा ग्रोनिंगेनमा जीना र मारिनसको दोहोरो हत्या »
कुल भ्रमण: 14.059.531